I-Laboratory Yokuhlaziywa Kwezilwane - UDarwin Messina
Ukuhlaziywa okunembile nokufika ngesikhathi kubangani bakho abanoboya ababili nabanemilenze emine.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-16)
Kuhlonyiswe ngokuphelele elebhu di ukuhlaziywa kwezilwane, iDarwin Centre itholakala Messina lapho inikeza ukuhlaziywa okujwayelekile futhi ukuhlolwa kokwelapha okuyisipesheli ngayinye izilwane isilwane e imfuyo izilwane.
I-laboratory yaseDarwin: ubuhle eMessina ngenhlalakahle yezilwane zakho
Izivivinyo zemihla ngemihla Ukuhlaziywa kwezilwane okukhethekile ngayinye nginga, isango, onogwaja, zinyoni, i-cavalli, izimvu, izinkomo, izingulube nabanye abaningi izilwane ezifuywayo e kusuka emholweni.
Il Elebhu di Ukuhlaziywa kwemitholampilo yezilwane Darwin yisikhungo esizinikezele enhlalakahleni nasempilweni yabangane bakho abanoboya. Ilabhorethri ibiziphakamisa yona iminyaka ethile njengendawo okuzobhekiswa kuyo Ukuhlaziywa kwemitholampilo yezilwane ezifundazweni zase Messina, sibonga imishini esezingeni eliphezulu futhi odokotela bezilwane wekhono elihlukile.
Ukuhlolwa okuvamile kanye nokuhlaziywa kochwepheshe bezilwane
Kunezivivinyo eziningi futhi ukuhlaziywa kwemitholampilo okunikezwayo okuvela ku- I-laboratory yaseDarwin: Ukubalwa kwegazi okuphelele, ukuhlolwa kwegazi, i-glycemic, i-electrolyte ne-coagulation profile; imithamo ye-hormonal; izivivinyo zokuhlonza izifo ezithathelwanayo neziphazamisayo zezinja namakati. Ukuhlolwa komchamo, indle, i-allergen kanye ne-cytology.
Zonke ukuhlaziywa kwezilwane zenziwa ngaphansi kwekhono, igunya nokunakekelwa kothando kwe- UDkt. Marcello Fiume. Ilabhorethri inikeza ikhathalogu eguqukayo njalo ye- ukuhlolwa kwemitholampilo yezilwane ngayinye izilwane ezincane nezinkulu. Kukuphi ilabhorethri yokuhlaziywa kwezilwane, isakhiwo asinakekeli kuphela odokotela bezilwane ukubasiza ekwenzeni umsebenzi wabo, kepha futhi nakubantu ngabanye, abanikazi bezindlu noma Abafuyi abadinga ilabhorethri yokuhlaziya esebenza kahle futhi esheshayo.
Ikheli: Via Ugo Bassi, oneminyaka engama-204
Ucingo: 090 9014622
Umakhala ekhukhwini: 328 3534135
Umakhala ekhukhwini: 371 1738488
Ifasitela lesitolo: www.darwin.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 03205240835